साइकल यात्रीलाई हेप्छ यो शहरले - National News
साइकल यात्रीलाई हेप्छ यो शहरले
कोटेश्वरबाट सहायक बाटो हुँदै स्वयंभुसम्म पुग्दा सडकमा देखिएका दृश्यहरुले एकपटक आफैंलाई लज्जित बनायो । मुलुककै राजधानी शहरमा बालबालिकाहरु सडकमा नै फुटबल र क्रिकेट खेलिरहेका छन् । फुर्सदिलाहरु सडकमा नै टुल राखेर घाम तापिरहेका छन् । मोटरसाइकल सिक्नेको पनि यही सडक उपयुक्त ठाउँ हो । यो सडकले मात्रै कतिको आवश्यकता पूरा गरेको छ ?
आवास क्षेत्रमा सडककै वारपार गर्नेगरी कपडा सुकाउनेदेखि एकैछिन सुस्ताउनको लागि पनि यही सडक निर्विकल्प बनेको छ । के विभिन्न समयमा गरिएका यस्ता सडक बिस्तारहरु यसैको लागि हो ? भन्ने प्रश्न आफैंले आफैंलाई सोधेँ । तर, निरुत्तरित म आफैंसँग उत्तरको खोजी गर्दै लागेँ आफ्नो गन्तव्यतिर ।
यो लामो इतिहास बोकेको काठमाडौं शहर विकासको लागि हामी छोटो योजनामा रुमलिँदै आएका छौं । हामी विकास भनेको ठूला सडक र अग्ला घरलाई मान्ने मानसिकताबाट अझैपनि माथि उठ्न नसकेका हौं र ? भन्ने प्रश्न शहरी विकासमा भइरहेका कामहरु देख्दा सरोकारवाला निकायका मानिसहरुलाई सोध्न मन लाग्छ । शहरबासीको लागि बनाएका हाम्रा धेरै परियोजनाहरु शहरकै अधिकांश मानिसहरुको लागि प्रतिकूल हुने किसिमका छन् । त्यसैले पनि यो शहर आखिर कसको लागि निर्माण हुँदैछ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
हामीले पछिल्लो २५ वर्षमा नै काठमाडौंलाई यति कुरुप बनाएका हौं भन्नेमा कसैको दुईमत नहोला । यही समयमा नै लाखौं सवारीहरुबाट कार्वन उत्सर्जन गरेर आफैंले लिने हावा दुषित गर्‍यौं । खाइनखाई जोगाएको पैसाले हामी आफ्नै लागि घातक हुने कार्वन उत्सर्जनका साधनहरु खरिद गर्ने गरेका छौं ।
कसैको लागि अनुकूल छैन यो शहर
यो शहर अहिले जिवित रहेका कुनै पुस्ताको लागि पनि हामीले अनुकूल बनाउन सकेनौं । सेवा निवृत्त हुने उमेर पुगेका हजुरबा/आमाको लागि यो शहरमा टहलिने ठाउँ छैन । छोरा-छोरी पुस्तालाई शहरमा यात्रा गर्नको लागि उपयुक्त बाटो छैन ।
वातावरणमैत्री सवारी चलाउनको लागि साइकल चढ्ने छोराहरु सुरक्षित रुपमा आफ्नै मार्गमा हिँड्न सक्दैनन् । इमान्दार भएर मोटरसाइकल चलाउनेहरु अर्काको कारण नै दुर्घटनामा पर्नुपर्छ ।
शनिबार विद्यालय बिदाभएपछि नाति पुस्ताको लागि खेल्ने चौर छैन । बालबालिकाको चञ्चलतालाई काठमाडौंको व्यस्त शहरले रोक्न सक्दैन । त्यसैले खुल्लम खुल्ला बच्चाहरु असुरक्षित रुपमा सडक कब्जा गरेर खेल्न बाध्य छन् । यसले सवारीमा यात्रा गर्ने र स्वयं सडकमा खेल्ने बच्चाहरु समेत असुरक्षित छन् ।
अब त चेत्ने बेला भएन र ?
विश्वका धेरै विकसित शहरमा सवारी प्रयोग गर्ने मान्छे नभएर प्रदूषण कम भएका होइनन् । विश्वको सबैभन्दा सफा शहरको सूचीभित्र पर्ने डेनमार्कको कोपनहेगन विश्वको सबैभन्दा धेरै साइकलमैत्री शहर मानिन्छ । त्यहाँ दैनिक ८ लाख ९४ हजार माइल साइकल यात्रीहरुले यात्रा गर्छन् । त्यहाँको मेयरको लागि नगरपालिकाले साइकल नै दिने गर्छ । त्यहाँ साइकल चढ्नेहरुलाई पेलेर हिँड्ने सवारी हुँदैनन् । साइकल चढेर त्यहाँ कसैलाई पनि सानो सम्झिने गरिएको छैन । त्यो शहर सफा र सुन्दर मात्रै नभएर व्यवस्थित शहरको रुपमा समेत चिनिएको छ ।
यस्ता धेरै शहरहरु छन् जुन साइकल सिटीको रुपमा विकास भएपछि झनै व्यवस्थित बनेका छन् । तर, हामीहरुले चक्रपथलाई बिस्तार गरेर त्यति ठूलो बनाउँदा पनि एउटा सानो साइकल लेनको आवश्यकता सम्झिएनौं । सरकारी ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरु वातावरण मैत्री शहरी विकासको एजेण्डा बोकेर हिँड्नेहरुलाई दुस्मनीको भावले हेर्ने गर्छन् । अब युवाहरुले आफ्नो तर्फबाट नै वातावरण जोगाउने र शहरी विकासमा आफ्नो योगदानबारे बहस नगर्ने हो भने हामीले २५ वर्षमा बिगारेकोभन्दा धेरै कुरुप काठमाडौं केही वर्षमा नै बनाइदिन्छौं ।
पहिलो चरणको चक्रपथ बिस्तारबाट पाठ नसिकेका हामीहरुले दोस्रो चरणको बिस्तारको क्रममा झनै ठूलो गल्ती गर्न पुग्यौं । चक्रपथ बिस्तार जस्तो मुद्दामा डिजाइन स्पष्ट रुपमा देखाएर सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेरमात्रै काम सुरु गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालको बाटोमा अरुले गरेको डिजाइन अनुसार सडक बनाउँदा त्यसले स्थानीयले आत्मीयता हाँसिल गर्न सक्दैन । दोस्रो चरण र पहिलो चरणको चक्रपथ बिस्तारको क्रममा समेत अन्धाधुन्दा रुख काट्न लागेको भनेर हामीले विरोध कार्यक्रम गर्दा हामीलाई नै विकास बिरोधीको बिल्ला भिराइयो । रुख काट्न नदिन हामीले स्वयंभु क्षेत्रमा रुखलाई अँगालो हालेर पनि बिरोध जनायौं ।
सडक बिस्तार कि व्यवस्थापन ?
शहरी विकासको एउटा आधारभुत आवश्यकता फराकिलो सडक पनि हो । तर, के सडक बिस्तारले मात्रै शहर व्यवस्थित हुन्छ त ? यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार २०५१ सालमा ७८ हजार सवारी दर्ता भएकोमा २० वर्ष पछि यो संख्या २०० प्रतिशत बढ्यो । २०७४ सालमा यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको एक तथ्यांक अनुसार ९ लाख सवारी साधन दैनिक काठमाडौंमा गुड्ने गरेका थिए । यो संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ ।
अब प्रश्न आउँछ । सडक बिस्तार गर्ने क्रममा व्यवस्थित नगर्ने र बिस्तार मात्रै गरिरहने हो भने अबको अर्काे ५ वर्षमा थपिने अनुमानित ५ लाख सवारीको लागि हामी फेरि सडक बिस्तार गर्न सक्छौं ? या त यसलाई व्यवस्थापन गरेर लैजानुपर्छ ?
फुटपाथमा नै वृक्षारोपण
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको वरिपरी जाने हो भने त्यहाँ हामीलाई फुटपाथमा हिँड्ने बाटो हुँदैन । हामीलाई वृक्षारोपण गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाइयो । तर, यसको अर्थ बाटो नै बन्द हुनेगरी वृक्षारोपण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । तर, ती ठाउँहरुमा गरिएको वृक्षारोपणले भने हामी अलिकति पनि जिम्मेवार बन्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । चक्रपथ बिस्तार गर्ने बेलामा रुख रोप्न सकिने ठाउँमा नरोप्ने र साँघुरा सडकमा रुख रोप्नुले आवश्यकता र अनुकूलताको आधारमाभन्दापनि वृक्षारोपण गर्नुपर्ने दबाबको कारण देखावटी रुपमा रुख रोपिएको देखिन्छ ।
हरियाली शहरको अर्थ यो पनि होइन कि सडक नै अवरोध हुनेगरी वृक्षारोपण गरियोस् । तर, चक्रपथ बिस्तार जस्ता ठूला सडक निर्माणको क्रममा दायाँबायाँ गि्रनबेल्ट तयार पार्दा र डिजाइन गर्दा जतिसक्दो धेरै रुख रोप्न सकिने गरी गर्नुपर्ने थियो ।
शहरबासीकै प्रतिकूल प्ररियोजना
शहरबासीको लागि केवल सडकको यात्रामात्रै ठूलो कुरा होइन । त्यो विशाल सडकमा यात्रा गर्नको लागि पहिले शरीर स्वस्थ हुनुपर्छ । त्यो उचित पर्यावरणबाट मात्रै हुन्छ । तर, हामी पर्यावरणसँग नै दुश्मनी गरेर आफ्नै प्रतिकूल काम गर्दैछौं । साइकल संस्कृतिको विकास गर्नको लागि हामीहरुको साइकल चलाउने बाटो नै छैन ।
साइकल विकल्पको रुपमा अघि सर्न नसकेपछि सबैजना पेट्रोल-डिजेलबाट चल्ने सवारीमा आश्रति हुने गर्छाैं । यसैबाट सुरु हुन्छ कार्वन उत्सर्जन र वातावरण प्रदूषण । त्यसैले आजैदेखि वातावरण जोखाउने र व्यवस्थित शहर निर्माणको लागि किन आफैं नजाग्ने ?
यी हुन् १५ विधाका उत्कृष्ट करदाता, अर्थमन्त्रीले गरे सम्मान
नाइट बसको बाटो छेकेर हात्तिले आक्र’मण गर्न खोजेपछि…(भिडियोसहित)
जथाभावी ब्युटी प्रोडक्टको प्रयोग : नपुंसकतादेखि क्यान्सरसम्मको जोखिम
November 26, 2019 admin192
के अब पर्यटक ठगिने छैनन् ?
10 makanan dan pencuci mulut terbaik dari Family Mart yang wajib anda cuba
July 22, 2020 admin192
Wanita kongsi hasil kerja tangan rak pasu dan kerusi guna kayu palet, barulah tak jemu mata memandang
Sengaja mengeraskan diri kerana tidak mahu dipeluk, telatah kucing hitam ini buat ramai yang tergelak besar
“Tuan sendiri dok hias”, wanita kongsi bapa bantu hasilkan kejutan gubahan bunga tanpa mengetahui dirinya adalah penerima
Lebih2jam “tidak melakukan apa-apa” di hadapan kamera, video lelaki ini tular sehingga mendapat ratusan ribu tontonan